Baabuurta Amisom oo Habeenkii Laga Mamnuucay Maka Al-Mukarama
Maamulka gobolka Banaadir ayaa gaadiidka ciidamada AMISOM ka mamnuucay in ay isticmaalaan waddada Maka-Almukarama, laga billaabo 6 maqribnimo illaa saq dhexe, 12 habeenimo.
Waxaa sidoo kale ay maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga isku dhafka ah ee loo magacaabay amniga ay ka mamnuuceen in waddadaasi dacalkeeda la dhigto baabuurta gaarka loo leeyahay si looga baaqsado weeraro qaraxyo ah oo gaadiidka loo adeegsado.
Waxaa tillaabooyinkan ay imanayaan ayadoo shaley maqaayad lagu cabo Coffee lagu diley 4, 7 kalana lagu dhaawacay kadib qarax ka dhacay.
Afhyaeenka maamulka Gobolka Banaadir ayaa VOA u sheegay in tillaabooyiinkan ay qaadeen guddi isku dhaf ah oo ay ku jiraan maamulka gobolka Banaadir oo loo qabtey shaley waxii ka dambeeyey sugidda amniga gobolka Banaadir.
Waxaa xusid mudan in sidoo kale xaley ugu yaraan 2 qof siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada, hase yeeshee maamulka gobolka gobolka Banaadir ayaa sheegay inay qaadayaan ficillo ka duwan kuwii hore, oo amniga lagu xaqiijinayo.